Inani le-Tile yamakhompiyutha weTile China Manufacturer
Incazelo:Umshini wephrinta weTile,Imishini yephrinta yeTile,I-Tile Photo Printer
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeCeramic > Inani le-Tile yamakhompiyutha weTile
I-Tile Printer Equipment isetshenziswa kakhulu ekukhangiseni kwangaphakathi nangaphandle kanye nomhlobiso ekhaya, ehhovisi, esikoleni, e-shopping mall, ehhotela, esontweni njll.
I-RFC iyisunguli se-Direct To Tile Photo Printer , futhi umshini wethu usize amakhasimende angaphezulu kuka-5000 ukwenza umhlobiso ngamunye futhi wehlisa izindleko zabasebenzi eminyakeni eyishumi eyedlule
I-Tile Printer Machine Price uhlobo oluthile lokungena othintana nohlobo lwe-jet uhlobo lwemishini ye-digital, uhlelo lwayo lubanzi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zoMshini wethu wephrinta we-Tile RF-A3UV:
2. I- Tile Photo Printer ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Umshini wephrinta weTile I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Imishini Yokunyathelisa Tile Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
I-Ceramic Ink yephrinta ye-inkjet Xhumana Nanje
I-Ceramic Ink Ukushicilela kwi-Glass Xhumana Nanje
I-A3 Ceramic Photo Printer Xhumana Nanje
Umshini wephrinta weTile Imishini yephrinta yeTile I-Tile Photo Printer Umshini wephrinta weThetile Umshini wephrinta we-Latte Umshini wephrinta we-Bag Umshini wephrinta we-Chocolate Umshini wephrinta yebha